फल को समूह के हुन्?
फल - एक अपरिहार्य शक्ति को तत्व, तिनीहरूले मानव जैविक एसिड प्रदान रूपमा, जो पाचन प्रणाली मा ब्यालेन्स राख्छ। जीवनको यी स्रोतहरू सक्रिय अनावश्यक को शरीर मा उद्भव र प्रसार रोक्न , मुक्त कण वृद्ध र छाला कक्षहरूको लोच को हानि गर्न प्रमुख। त्यो डाक्टर किन सुगन्धित फल प्रयोग गर्न सिफारिस मात्र भित्र छन् तर पनि मास्क तिनीहरूलाई बारी छ।
बोक्रा, बोक्रा: सबैभन्दा भिटामिन फल माथिल्लो पत्रहरु मा केंद्रित छ। त्यसैले, सफा सतह संग फल बन्द छैन कटौती गर्न सकिन्छ। 20 मिनेट पछि - विख्यात रूपमा, बिहान यो पहिलो उपयोगी मुख्य खाना रूपमा फल, खाद्य पदार्थ प्रयोग गर्न छ। को रात मा रसदार फल रूपमा यो पेट मा अनावश्यक किण्वन सक्छ, त्यहाँ हुन सक्दैन, र सट्टा राम्रो को हानि हुनेछ।
फल केही समूह विभाजित भएको हुन्छ। रंग सामान आधारित तिनीहरूलाई प्रत्येक, जो केवल तिनीहरूलाई बहुमूल्य पोषण गुण मा निहित छ फल जोडती। तसर्थ, मानव आहार विभिन्न प्रकार को फल समावेश गर्नुपर्छ। रातो, सुन्तला, हरियो बैजनी, पहेँलो र सेतो र खैरो: त्यसैले, रंग को आधारमा फल को निम्न समूह सेट।
रातो फल समूह खरबुजा, गुलाबी अंगुर दाख र स्ट्रबेरी जोडती। तिनीहरूले ओक्सीकरण प्रक्रिया ढिलो, carotenoids को एक उच्च एकाग्रता समावेश गर्दछ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, क्यान्सर ट्यूमर को विकास रोक्छ, र हृदय रोग रोक्न सक्छ। रातो फल ताजा खान र प्राथमिकताको, बासी होइन।
साधारण र खूबानी - फल को सुन्तला समूह को प्रतिनिधिहरु। तिनीहरूले बिटा-carotene को प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। दृश्य acuity प्रभावित, भिटामिन ए को गठन बढावा जो यो पदार्थ। Carotene राम्रो एंटीओक्सिडेंट छ।
हरियो फल को समूह बाहिर अभोकाडो र खडा हरियो स्याउ। यी फल क्याल्सियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम - - र एक ठूलो पाचन सुधार, आहार फाइबर को मात्रा chlorophyll, ट्रेस तत्व समावेश गर्दछ। Chlorophyll क्यान्सर को घटना रोक्न सक्षम छ। nutritionists अनुसार, यो यसको कच्चा फारममा फल खान राम्रो छ।
बकाइन प्लम, अङ्गुर, ब्लूबेरी, Blackberries जोडती। तिनीहरूले एंटीओक्सिडेंट समावेश, रगत थक्के रोक्छ। प्रभावकारी, रोगजनकों लड्न शरीर मा कक्षहरू बाँच्ने उमेर बढन ढिलाइ मदत गर्न मद्दत गर्नुहोस्। गर्मी उपचार आफ्नो पोषण मूल्य घट्छ, त्यसैले यो सबै भन्दा राम्रो यी तरकारी कच्चा प्रयोग छ।
पहेंलो फल - यो स्याउ, cantaloupe, भुईँकटर, आडू छ। पहेंलो समूह flavonoids एक नम्बर समावेश गर्दछ। यी जैविक पदार्थ, पाचन सक्रिय जीवाणुरोधी र एंटीओक्सिडेंट गुण छ।
र अन्तमा, सेता र खैरो समूह, सेतो बेज र खैरो फल हुन्छन्: केले, मिति, सेतो खरबुजा, नासपाती खैरो छाला संग। निहित allicin र गाउँमा हृदय को काम समर्थन संलग्न छन् पदार्थ, रगतमा अनावश्यक कोलेस्ट्रल को स्तर कम।
आफ्नो दैनिक आहार मा तरकारी विभिन्न समूहहरू - स्वास्थ्य को ग्यारेन्टी! फल एउटा आहार - एक स्लिम आंकडा बाटो!
क्लिनिक Gavrilova, वजन कमी केन्द्र: ठेगाना, समीक्षा
म 10 किलो मा वजन गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने?
स्वस्थ खाना: क्यालोरी गहुँ porridge
अंगुर दाख को उपयोगी गुणहरू
हामी साँच्चै एक स्याउ मा क्यालोरी कति थाहा गर्नुपर्छ?
पीएमएस - एक महिला मुद्दा
मानव छालाका केही रोगहरू
भाषा पट्टी गायब। के गर्ने?
DTP टीका (खोप)। Komarovsky कसरी DTP संग खोप लागि आफ्नो बच्चा तयार सल्लाह ...?
Postoperative hypoparathyroidism: लक्षण र रोग को उपचार
"Onegin Dacha" (Rostov-मा-डन): विवरण, समीक्षा
उच्च स्नायु गतिविधि - स्वभाव प्रकार
एक अद्भुत छुट्टी र एक राम्रो होटल रुचि राख्नु हुन्छ? मिश्र सिद्ध
पाब्लो र Manuela Escobar: जीवनीहरू र रोचक तथ्य